Imigomo nemibandela | I-Crypto Gator | I-Best Cryptocurrency, iBlockchain ne-Forex News Aggregator
Sigodla ilungelo nganoma yisiphi isikhathi uku:
Noma yiziphi izinguquko esizenzayo kumigomo nemibandela zizosebenza ngokushesha ngemuva kokuthumela imigomo nemibandela eguquliwe ku-CryptoGator.co.
Yonke imininingwane nokunye okuqukethwe okuboniswe, kudluliswa, noma kusetshenziswa maqondana ne-Crypto Gator Sites, kufaka phakathi isibonelo, ukukhangisa, izinkomba, imihlahlandlela, izindatshana, imibono, ukubuyekezwa, umbhalo, izithombe, izithombe, imifanekiso, iziqeshana zomsindo, ividiyo, i-html, umthombo nekhodi yento, isoftware, idatha, ukukhethwa nokuhlelwa kwalokhu okushiwo ngenhla kanye "nokubukeka nokuzizwa" kwamaSayithi we-Crypto Gator (ngokuhlangene, "Okuqukethwe"), kuvikelwe ngaphansi kwamalungelo obunikazi asebenzayo kanye nokunye ukuphathelene ( kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kumalungelo obunikazi bokusungula) amalungelo futhi ayimpahla yengqondo ye-Crypto Gator, nezinkampani ezihambisana nayo, abanikezeli bamalayisense nabahlinzeki. I-Crypto Gator ivikela ngokuqinile amalungelo ayo wokuqukethwe ngezinga eligcwele lomthetho.
Ungakusebenzisa okuqukethwe ku-inthanethi futhi uzisebenzisele wena siqu, okungekhona okokuthengisa, futhi ungalanda noma uphrinte ikhophi elilodwa lanoma iyiphi ingxenye Yokuqukethwe ukuze uzisebenzisele wena siqu, hhayi ukuthengisa, uma nje ungasusi noma iluphi uphawu lwentengiso, ilungelo lobunikazi noma esinye isaziso esiqukethwe kulokhu okuqukethwe. Ngeke, ngokwesibonelo, ungaphinde ushicilele okuqukethwe kunoma iyiphi i-Intanethi, i-Intranet noma isayithi le-Extranet noma ufake okuqukethwe kunoma iyiphi i-database, iqoqo, ingobo yomlando noma inqolobane noma ugcine okuqukethwe kufomu le-elekhthronikhi kukhompyutha yakho noma kudivayisi yakho ephathekayo ngaphandle uma kuvunyelwe ngenye indlela yi-Crypto IGator. Awungeke usabalalise noma yikuphi okuqukethwe kwabanye, noma ngabe kuyakhokhwa noma cha noma okunye ukucatshangelwa, futhi awukwazi ukuguqula, ukukopisha, ukubiyela, ukukhiqiza kabusha, ukuthengisa, ukushicilela, ukudlulisa, ukubonisa noma ukusebenzisa enye ingxenye yokuqukethwe, ngaphandle kwe kuvunyelwe Imigomo Nemibandela noma ngokuthola imvume ebhaliwe ye-Crypto Gator.
Okuqukethwe kufaka phakathi ama-logotypes, izimpawu zokuhweba namamaki wensizakalo (ngokuhlangene “Amamaki”) aphethwe yi-eBargains Today Online Store Ltd., kanye namamaki aphethwe abanye abahlinzeki bemininingwane nabantu besithathu. Isibonelo, i- "Crypto Gator" wuphawu lokuhweba olubhalisiwe lwe-eBargains Today Online Store Ltd. Awekho amamaki angasetshenziswa nganoma iyiphi indlela ngaphandle kokuthi kuvunyelwe kusengaphambili, ngokubhala yi-eBargains Today Online Store Ltd.
Izicelo zokusebenzisa okuqukethwe nganoma iyiphi inhloso ngaphandle kokuthi kuvunyelwe kumigomo nemibandela kufanele zithunyelwe support@cryptogator.co.
ICrypto Gator ihlonipha impahla yabanye. Uma ukholwa ukuthi umsebenzi wakho ukopishwe ngendlela equkethe ukwephulwa kwelungelo lobunikazi noma wazi noma yikuphi ukwephulwa komthetho okubekwe yinoma ngubani ovela kuwebhusayithi, sicela uxhumane nomenzeli wethu we-copyright, ngokubhala, nge-imeyili ku support@cryptogator.co
Attn: Umenzeli Wamalungelo Okushicilela, bese uhlinzeka ngemininingwane elandelayo njengoba kudingwa yi-Online Copyright Infringement Liability Limit Act of the Digital Millennium Copyright Act, 17 USC Section 512 (c) (3):
Imininingwane, imikhiqizo kanye nezinsizakalo ezisezindaweni ze-Crypto Gator zinikezwa ngokuqinile "njengoba kunjalo," "kuphi" futhi "lapho kutholakala khona". ICrypto Gator ayinikeli ngamawaranti (noma avezwe noma ashiwo) maqondana nemininingwane enikezwe kunoma iyiphi I-Crypto Gator site kanye / noma ukusebenzisa kwakho noma iyiphi ifayili le- I-Crypto Gator Amasayithi ngokuvamile noma nganoma iyiphi injongo ethile. I-Crypto Gator izilahla ngokusobala noma iziphi iziqinisekiso ezisetshenzisiwe, kufaka phakathi kepha kungagciniwe, kumawaranti wetayitela, ukungaphuli umthetho, ukuthengiswa noma ukufaneleka kwenjongo ethile. I-Crypto Gator ngeke kube nesibopho sokulahleka noma ukulimala okungabangelwa ukuvinjelwa yizinkampani zangaphandle kwanoma yiluphi ulwazi olutholakale kuwe nge I-Crypto Gator Amasayithi noma enye yazo. Yize imininingwane oyinikezwe kule webhusayithi itholakala noma ihlanganiswe ngemithombo esikholwa ukuthi ithembekile, I-Crypto Gator ayikwazi futhi ayiqinisekisi ukunemba, ukuba semthethweni, ukugcina isikhathi, noma ukuphelela kwanoma iluphi ulwazi noma idatha eniyitholile nganoma iyiphi injongo ethile. Akunjalo I-Crypto Gator, nanoma iyiphi inxusa layo, abaqondisi, izikhulu noma abasebenzi, noma abahlinzeki bokuqukethwe benkampani yangaphandle, isoftware kanye / noma ubuchwepheshe (ngokuhlanganyela, "I-Crypto Gator amaqembu ”), uzobophezeleka noma abe nesibopho sanoma iluphi uhlobo nganoma yikuphi ukulahleka noma ukulimala ongahle kwenzeke lapho kwenzeka ukwehluleka noma ukuphazamiseka kwanoma yikuphi I-Crypto Gator isayithi, noma ngenxa yesenzo noma ukweqiwa kwanoma yiliphi elinye iqembu elibambe iqhaza ekwenzeni noma yini I-Crypto Gator isayithi, imininingwane equkethwe kuyo noma imikhiqizo noma izinsizakalo ezinikezwayo ongazithola, noma kunoma isiphi esinye isizathu esimayelana nokufinyelela kwakho, ukungakwazi ukufinyelela, noma ukusebenzisa noma yikuphi I-Crypto Gator indawo noma izinto eziqukethwe kuyo, noma ngabe izimo eziholele kuleso sizathu kungenzeka zibe ngaphansi kolawulo lwe- I-Crypto Gator noma kwanoma yimuphi umthengisi ohlinzeka ngesoftware noma amasevisi.
Akunakusetshenziswa I-Crypto Gator noma noma yikuphi I-Crypto Gator izinhlangano kufanele zibophezeleke kuwe, noma ngabe ziyisivumelwano noma zihlukunyezwa, nganoma yimuphi umonakalo oqondile, okhethekile, ongaqondile, olandelanayo noma ohilelekile noma yimuphi omunye umonakalo wanoma yiluphi uhlobo noma ngabe I-Crypto Gator noma omunye umuntu onjalo welulekisiwe ngokuthi kungenzeka lokho. Lo mkhawulo wesikweletu ubandakanya, kepha awukhawulelwanga, ukudluliswa kwanoma yimaphi amagciwane angahle athelele okokusebenza komsebenzisi, ukwehluleka kwemishini noma imishini kagesi noma olayini bezokuxhumana, ucingo noma ezinye izinkinga zokuxhumana (isb. , ukufinyelela okungagunyaziwe, ukweba, amaphutha we-opharetha, iziteleka noma ezinye izinkinga zabasebenzi noma yikuphi ukuphoqelelwa kwamandla. I-Crypto Gator ayikwazi futhi ayiqinisekisi ukufinyelela okuqhubekayo, okungaphazanyiswa noma okuphephile kunoma iyiphi I-Crypto Gator Izindawo.
Yonke imibono yababhali ngeyabo futhi ayenzi izeluleko zezezimali nganoma iyiphi indlela. Akukho lutho olushicilelwe yi-Crypto Gator olwenza isincomo sokutshala imali, futhi noma iyiphi idatha noma okuqukethwe okushicilelwe yi-Crypto Gator akufanele kuthembelwe kukho kunoma yimiphi imisebenzi yokutshala imali.
ICrypto Gator incoma ngokuqinile ukuthi wenze olwakho ucwaningo oluzimele futhi / noma ukhulume nochwepheshe ofanele wokutshala imali ngaphambi kokwenza noma yiziphi izinqumo zezimali.
Izixhumanisi ezithile, kufaka phakathi izixhumanisi ze-hypertext, kusayithi lethu zizokusa kumawebhusayithi angaphandle. Lokhu kunikezwa ukuze kube lula kuwe futhi ukufakwa kwanoma yisiphi isixhumanisi akusho ukuvumela noma ukuvunywa yi-Crypto Gator yesayithi elixhunyiwe, opharetha noma okuqukethwe kwalo. Ngayinye yalezi webhusayithi ine "Imigomo Nemibandela" yayo. Asinasibopho sokuqukethwe kwanoma iyiphi iwebhusayithi engaphandle kwamaSayithi we-Crypto Gator. Asiqapheli futhi asithathi msebenzi wokuqapha okuqukethwe kwanoma yimaphi amawebhusayithi avela eceleni.
Ama-cookies amancane amafayela wombhalo afakwa kwikhompyutha yakho ngamawebhusayithi owavakashelayo. Zisetshenziswe kabanzi ukuze zenze amawebhusayithi asebenze, noma asebenze ngokuphumelelayo, kanye nokunikeza ulwazi kubanikazi besayithi.
Lawa makhukhi asetshenziselwa ukuqoqa imininingwane yokuthi izivakashi zisebenzisa kanjani isayithi lethu. Sisebenzisa imininingwane ukuhlanganisa imibiko nokusisiza sithuthukise isayithi. Amakhukhi aqoqa imininingwane ngendlela engaziwa, kufaka phakathi inani lezivakashi eziya kusayithi, lapho izivakashi zize khona kusayithi kusuka nasemakhasini abavakashele.
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuthi singabeka lezi zinhlobo zamakhukhi kudivayisi yakho.
IMigomo Nemibandela kanye nesivumelwano esenziwe ngalokhu (“Isivumelwano”) sizolawulwa, futhi sibonwe futhi siphoqelelwe ngokuhambisana nemithetho yeSifundazwe saseBritish Columbia, eCanada, ngaphandle kokubheka ukuhlinzekwa kwemithetho. Ngaphandle kokuthi kuvunyelwane ngenye indlela ngokubhala nguwe nathi, noma iyiphi impikiswano evela noma ephathelene neSivumelwano, noma ukwephulwa kwalokhu, ekugcineni izosombululwa ngokulamula okuphethwe yiCanada Arbitration Association ngaphansi Kwemithetho Yayo Yokuxazulula Ezentengiselwano, noma umzimba onjalo wokulamula njengoba kudingeka ngomthetho, umthetho noma umthethonqubo, kanye nokwahlulela ngomklomelo owenziwe ngumlamuli kungangeniswa kunoma iyiphi inkantolo enamandla athile. Umbango uzokwenziwa ngolimi lwesiNgisi ngaphambi komlamuli oyedwa eMkhandlwini waseVancouver, eBritish Columbia, eCanada. Ukulamula okunjalo kufanele kuqale kungakapheli unyaka (1) ngemuva kokuvela kwesimangalo noma imbangela yesenzo. Uma nganoma yisiphi isizathu noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi Sivumelwano, noma ingxenye yaso, kungeke kuphoqeleke, lokho kuhlinzekwa kuzophoqelelwa kuze kufike ezingeni elivunyelwe ukuze kusebenze inhloso yalesi Sivumelwano, kanti okusele kwalesi Sivumelwano kuzoqhubeka nokusebenza ngokugcwele nomphumela. Lesi Sivumelwano sakha sonke isivumelwano phakathi kwethu nawe maqondana ne-Crypto Gator Sites futhi sithatha konke ukuxhumana kwangaphambilini noma okwenzeka ngesikhathi esifanayo, izivumelwano kanye nokuqonda phakathi kwethu nawe maqondana nendaba yalokhu. Uhlobo oluphrintiwe lwalesi Sivumelwano luzokwamukeleka ezinkambisweni zokwahlulela noma zokuphatha.
Noma yimaphi amalungelo anganikezwanga ngokucacile lapha agodliwe.
© 2020 eBargains Namuhla Isitolo Esiku-inthanethi LTD.
Kubuyekezwe ngo-Okthoba 1, 2020